ဧပြီလ 26, 2013 တွင် 2:26 ညနေ
ဒါကြောင့်ဒီ &nbsp; ပယ်ချခံရဖို့ထင်? နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ကတည်းက, ငါရှေ့ဆုံးကိုအပေါ်ကိုဘာသာပြန်စာပေရွေးချယ်စရာ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ကိုမြင်လျှင်ငါ, အဘယ်ကြောင့်?
ဧပြီလ 27, 2013 တွင် 12:13 နံနက်
သငျသညျထို site ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့မြင်မပြုသင့်, သင်ဤတွေ့မြင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်, ကျနော်တို့ကဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်.
မေ 31, 2013 တွင် 9:20 နံနက်
ငါ့အဘို့, ဒီဗားရှင်းကအရမ်းအဆင်ပြေ, ငါမဆိုအခြားပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့.